यो कसको पीडा ? - शखदा साहित्य
यो कसको पीडा ?
12:02 PM बाल एकाङ्की, बालसाहित्य
पात्र - २५-३० वर्षी आमा
छोरी - ठूली छोरी ८-१० वर्षी
छोरी - सानी छोरी २ वर्षी
(आठ-दसजना आर्मी-पोसाक लगाएका)
(एउटा सानो कोठा । छेउमा दाउराको चूल्हो र आमा भात पकाउँदै गरेकी ।एउटी छोरी काखमा अर्की छोरी छेउमा आमासँग बसेर कुरा गर्दै गरेका, खोपीमा कुपी बलेको,)
ठूली छोरी - आमा,आज पनि कनिकाको खोले पकाउनुभयो । हैन - कहिलेकाहीँ त, भात खान पनि मन लाग्छ नि
आमा - के गरौँ छोरी - भात खान चामल चाहिन्छ । चामल किन्न पैसा छैन । यही कनिका पनि दिनभरि पल्ला घर ठूल्दाइकहाँ चामल केलाएर ल्याएकी छु । नत्रभने हामी भोकै हुन्थ्यौँ छोरी । यति भएपछि पेट भरिन्छ अनि रातभर आरामले सुत्न सकिन्छ नि
ठूली छोरी - त्यो त हो आमा र अनि तपाइँ एक्लै कमाएर खुवाउन कहाँ सक्नु हुन्छ र - खोइ त हाम्रा बा - बा, कहाँ जानुभयो नि -
आमा - तिमेरूका बा कहाँ जानुभयो, किन जानुभयो - मलाई केही थाहा छैन, छोरी । मलाई केही नभनी हिँडेका हुन् ।
ठूली छोरी - अनि आमा सधैँभरि रेडियोले कति मान्छे मरे कति बन्द भयो कति हमला भयो भन्छन् नि र त्यो के भनेको हो आमा -
आमा - खै छोरी र के भएको हो - म पनि केही बुझ्दिन । तेमेरुका बा पनि त्यतै कतै परे होलान् कि नत्रभने घर आउनुपर्ने हो । यसरी हामीलाई माया नमार्नुपर्ने हो
ठूली छोरी - आमा र अनि हाम्रा बा त आतङ्ककारी रे, अनि पुलिसहरूले लगेर मारे रे भनेर गाउँमा मलाई सुनाउँछन् नि हो - त साँच्चै र हाम्रा बा आतङ्ककारी हो रे ?
आमा - खै छोरी, त्यो मलाई थाहा छैन । सबैजना सुखमा मात्र साथ दिँदा रहेछन् ।आपत्तिमा कोही आफ्नो हुँदैनन् रहेछन् । कति खोजेँ, खबर गरेँ तर कतै पत्ता लागेन । तिमेरूलाई छोडेर टाढा जान पनि सक्दिनँ । पढ्या-लेख्या केही छैन । केही जानेको छैन ।
सानो छोरी - आमा, भात पाक्यो - खाऊँ न ।
आमा - पख् न पख् यसैलाई हतार पर्दो रहेछ । यसैले गर्दा नि र यो छोरो भएर जन्मेकी भए पनि त मैले यो दिन देख्नुपर्ने थिएन होला ।
ठूली छोरी - अनि आमा - कान्छी छोरो भएकी भए हाम्रा बा हामीलाई छोडेर जाँदैनथे ?
आमा - हो छोरी.., तँ सानै छेस् । तैँले धेरै कुरा बुझ्नु बाँकी छ । तँलाई म सानैदेखि धेरै कुरा बुझाउनेछु ताकि तैले मैलेजस्तो पीर खेप्नु नपरोस् । तैँले पढेर ठूली मान्छे हुनुपर्छ अनि धेरै कुरा सिक्नुपर्छ । अरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ ।
(लामो सास फेर्छिन् )
ठूली छोरी - अनि हाम्रा बाले किन हामीलाई छोडेर गएका नि - भन्नोस् न् आमा ?
आमा - सुन् म भन्छु ।त जन्मँदा छोरी भएर जन्मिस् । (भाँडाका भात चलाउँदै ) तँ छोरी भनेर तेरा बालाई त्यति पीर परेन किनभने अर्को सन्तान छोरो हुनसक्छ नि भनेर मन बुझाए । तर हाम्रो समाजका मानिसहरू अरूलाई गिराउँदा र खसाउँदा नै आनन्द मान्छन् । मीठो कुरा गर्दै किन पीर मान्छस्, अर्कोचोटि छोरा जन्मिहाल्छ नि भन्दै मुटुमा भाला रोप्थे । त्यसपछि धेरै समयसम्म बच्चा भएन । अनि गाउँले अर्को बिहे गर् छोरा पाउनसम्म भनेर तेरा बालाई उचाले ।तेरा बा पनि अरूका लहैलहैमा लागेर झन्डैझन्डै अर्की ल्याउन तयार भएका थिए रे र पछि केटीले आउन मानिन रे भनेको सुन्छु । त्यसपछि सानी छोरी जन्मने भई ।सानी छोरो भएर जन्मन्छे भनेर तेरा बा खुसीले रमाएका थिए । तर छोरी जन्मी भनेको सुनेर त्यो रात घर नै आएनन् ।कति दिनसम्म मसँग बोलेनन् । सुत्केरी जीउ, जसोतसो गरेर नानी र आफूलाई सम्हालेँ ।कोही मनमा भगवान् भएका मानिसहरू पनि हुदाँरहेछन् ।उनीहरूले तेरा बालाई सम्झाए अनि गाली पनि गरे । मलाई त मर्न मात्र मन लाग्थ्यो तर तिमीहरूको मायाले मर्न पनि त सक्दिनथेँ ।
ठूली छोरी - अनि आमा.., बा त्यसपछि घर आएनन् ?
आमा - त्यसपछि गाउँकाले पनि केके भनेर उचाले । नत्र के भनेर मन बिगार्थे र र उनी कहिलेकाहीँ मात्र आउँथे र डाँडाबजारमा व्यापार गर्छु भनेर अलिअलि रकम छोड्दै जान्थे । त्यही पैसाले घर चलाउँदै आएकी थिएँ ।अहिले त ठ्याक्कै छ महिना भयो नाकमुख नदेखाएको, कति जोखाना देखाइसकेँ अझै चारपाँच वर्षफर्केर आउँदैनन् भनेर झाँक्री बा भन्छन् । मन फर्काउनुपर्छ भन्छन् ।
-त्यसै बेला आर्मीजस्ता लुगा लगाएका आठ-दसजना मानिस प्रवेश गर्छन् ।आमा र छोरीहरू आत्तेकाझैँ हुन्छन् )
एकजना - खोइ ? चन्द्रे कहाँ छ ?
आमा - खोइ ? मलाई केही थाहा छैन, हजुर । छ महिना भइसक्यो नाकमुख नदेखेको ।
अर्को - ठीकै छ ! कुरा बनाउने हैन नि - आयो भने क्याम्पमा पठाइदिनू ।
आमा - हवस् हजुर, पठाइदिइहाल्छु नि ।
ठूली छोरी - आमा यिनीहरूले किन खोजेका हाम्रा बालाई ?
आमा - के थाहा छोरी मलाई र मलाई थाहा भएको भए भइहाल्थ्यो नि, म यिनीहरूको साथमा तेरा बालाई मरे कि बाँचे भनेर खोज्न जान्थेँ ।
ठूली छोरी - अनि आमा तपाइँलाई पनि यिनीहरूले लगे भने हाम्रो हालत के हुन्छ होला -
आमा - छोरी, म कतै मरेँ अथवा केही भइहालेँ भने सबै मानिसहरू खराब हुँदैनन् । अनाथ बच्चाहरूलाई पाल्न खोलिएका धेरै अनाथ-आश्रमहरू छन् । त्यस्तामा जानू अनि राम्रोसँग पढेर ठूली मान्छे बन्नुपर्छ तैँले ।
(आमा सुँक्कसुँक्क गरेर रुन थाल्छिन्)
ठूली छोरी - आमा नरुनोस् न । हाम्रा मामा पनि त हुनुहुन्छ नि हामीलाई माया गर्ने र
आमा - तेरा मामाले तिमीहरूलाई कति दिन पाल्न सक्नुहुन्छ र ? उनीहरूका पनि आफ्नै समस्या हुन्छन् । म तेरो मामालाई पनि खबर पठाउँछु ।सहरमा विदेशीहरूले खोलेका राम्राराम्रा अनाथ-आश्रम छन् रे अनि स्याहार पनि राम्रो हुन्छ र पढाइ पनि राम्रो हुन्छ रे । त्यसैमा लगेर हालीदिनू भनेर मामालाई भन्नू, अनि तैँले पनि बहिनीलाई सम्हाल्नू र माया गरेर राख्नू, है ?
कान्छी छोरी - आमा ! भोक लाग्यो, भात खाऔँ न ।
आमा - छोरी, थाल लेऊ, भात खाऔ अनि सुतौँला ।
(सबैजना खोले खाएर सुत्छन् ।)
("भोलिपल्ट" लेखेको कागज स्टेज अगाडि देखाउँदै एकजना जान्छ ।)
आमा - (उठेर पानी लिन जान्छिन्) पानी ल्याइसकेपछि ठूली छोरीलाई उठाउँछिन् ।) छोरी म सदरमुकाम जाँदै छु तेरा बालाई खोजी गर्न । बहिनीलाई बिहान, दिउँसो र बेलुका गरेर तीनपल्ट खोले खुवाउनू अनि मकै भुटेर खानू ।म बेलुका आउन भ्याउँदिन होला ।भोलिमात्र आउँछु । राति राम्रो ढोका लगाएर सुत्नू । पल्लो घरकी काइँली आमैलाई सुत्न भनिदिन्छु है ...।
ठूली छोरी - हुन्छ आमा, तपाइँ पीर नलिई बालाई खोज्न जानोस् । हामी राम्ररी बस्छौँ ।
(आमा सानो पोको चेपेर बाहिर जान्छिन् ।)
(एकछिनपछि अम्खोरा पानी सारेर मुख धुन ठूली छोरी पनि बाहिर जान्छे । कान्छी छोरी सुतिरहेकी हुन्छे । जेठी छोरी मुख धोएर खोले पकाउन थाल्छे । कान्छी छोरी उठ्छे अनि उसलाई मुख धोएर खोले खुवाउन थाल्छे ।नेपथ्यमा बम जस्तो पडकेको सुनिन्छ । दुवै केटी तर्सन्छन् । एक छिनपछि मानिसहरू उनीहरूकी आमालाई रगतपच्छे अवस्थामा बोकेर ल्याइपुर्‍याउँछन् ।)
ठूली छोरी - आमा र तपाईलाई के भयो ? तपाइँ किन यसरी रगतैरगत हुनुभएको ?
आमा - छोरी म बाटामा जाँदाजाँदै अचानक बम पड्केर मेरो यो हालत भयो (अशक्त भएर पनि केही बोल्छिन् ।) छोरी मैले भनेका कुरा सम्झनू । म मरेँ भने पनि हरेस नखानू ........ मामालाई मैले सबै कुरा भनेकी छु । बैनीको ख्याल गर्नू ।
(आमाको शब्द बन्द हुन्छ )
("ठूली छोरी र कान्छी छोरी जोडजोडले रुन्छन् अरू उपस्थित भएकाहरू पनि रुन्छन् ।)
एकजना केटो स्टेजमा "यो कसको पीडा" लेखेको बोर्ड सबैलाई देखाउँदै हिँड्छ अरू पात्र मूर्तिजस्तै भएर बस्छन् ।
नेपथ्य - (नेपथ्यबाट आवाज आउँछ ) यो कसको पीडा हो ? यो पीडा तपाईहाम्रै छोराछोरीहरूको पीडा हो । बाबुआमाबिनाका अनाथ बालबालिकाले कसरी बाँच्न सक्छन् ? कल्पना गर्नोस् त र ठूलाको लर्डाईमा पीडित भएका यी बालबालिकाहरूको के दोष छ र - यसको जिम्मेवार हामी नै छौँ र हामीले नै यसको समाधान खोज्नुपर्छ ।
(त्यसपछि पात्रको परिचय हुन्छ ।)
('उज्यालो बाटो शिक्षाको' बालएकाङ्की संग्रहमा समाविष्ट भएको)
"sangham saranam gacchami"